> Resource > Android > Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Nokia in HTC
In aad telefoonka jir Nokia muddo dheer, oo hadda aad rabto in aad isbeddel ku samayso. Sidaa awgeed, aad iibsato telefoonka HTC ah, sida HTC Mid ka mid X. Si kastaba ha ahaatee, hal wax oo aad u ogolaanaysaa hoos u yahay in dhammaan dadka ay khuseyso waxaa la badbaadiyey on telefoonka jir Nokia. Inkasta oo aad ku qor kartaa mid ka mid xiriir mid ka mid ah ee aad taleefan HTC, aad leedahay si ay wakhti badan ku qaataa waa on oo aad baabuur wadi doonaa waalan. Xaaladdan oo kale, waxa aad samayn karto si ay u gudbiyaan xiriirada ka Nokia in phone HTC?
Si aad u qabtaan Nokia ay u HTC xiriir kala iibsiga leh hab ammaan ah oo degdeg ah, waxaan jeclaan lahaa inaan ku talinaynaa in aad guys awood leh qalab kala iibsiga phone - ka Wondershare MobileTrans . Iyadoo mid ka mid click, iyo dhammaan dadka ay khuseyso ku phone Nokia Symbian waxaa loo wareejin doonaa telefoonka cusub HTC. Qalabkani waxa uu taleefanka kala iibsiga ma aha oo kaliya ku wareejinaya taleefan lambarrada, laakiin magaca shirkadda, jagada shaqada, cinwaanka email iyo in ka badan info nuqul waqti isku mid ah.
Qaybta hoose ku idin Toosiya tallaabooyinka faahfaahsan oo ku saabsan sida loo nuqul ka xiriirada ka Nokia in HTC la qalab kala iibsiga telefoonka. Waa maxay sababta aan kala soo bixi qalabka iyo isku day ah oo ay leeyihiin?
Tallaabada 1. Daahfurka qalab kala iibsiga phone kombuutarka
First of dhan, rakibi iyo abuurtaan qalab kala iibsiga telefoonka - Wondershare MobileTrans ku PC Windows ah. Tani waxay keeni doonaa suuqa kala hoose.
Fiiro Gaar ah: Iyada oo taageero ka Wondershare MobileTrans ah, waxaad awoodi doonaa inay xawilaan xiriirada ka phone Nokia ah in ay maamulaan Symbian 40/60 / ^ 3 iyo Windows 8 / 8.1 in aad telefoon HTC tahay.
Tallaabada 2. Isku telefoonka Nokia Symbian iyo telefoonka HTC in uu kombuutarka
Connect labada telefoonka Nokia Symbian iyo telefoonka HTC in kombiyuutarka deeruhu in fiilooyinka USB. Ka dib markii ay ku xiran, telefoonada aad lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala hoose. Si aad u gudbiyaan xiriirada Nokia in HTC, waa in aad hubiso in aad telefoon Nokia Symbian waa in sanduuqa bidix il iyo telefoonka HTC sanduuqa caga xaq u sameeyaan. Haddii aan, guji Flip si uu u xaliyo meelaha ay.
Wixii Nokia Phone ku salaysan Windows 8 / 8.1, fadlan dib ilaa xiriiro si ay u account OneDrive hore. Markaas riix Soo Celinta ka kaabta on interface Mobiletrans in la soo celiyo xiriir ah inay telefoonka bartilmaameedka.
Tallaabada 2. xiriirada ka dhaqaaq Nokia in HTC
Si aad u gudbiyaan xiriirada oo kaliya, waa in aad uncheck files kale, waxaad tidhaahdaan, fariimaha qoraalka ah, music, videos iyo sawiro. Markaas, riix Start Copy laga bilaabi karo habka xiriir kala iibsiga. Daqiiqadii ah, oo dhan xiriir la info dhamaystiran noqon doonaa ku saabsan telefoonka HTC.
Si wanaagsan baad yeeshay! Ayaa qalab kala iibsiga telefoonka ayaa si guul leh u dhaqaaqay dhammaan xiriirada ka phone Nokia ah in aad telefoon HTC. Hadda, wac qof aad jeceshahay. Halkan waxaa sidoo kale ku sharaxay guide on sida ay u gudbiyaan xiriirada ka Android inay Android , aad iska baarto.